fanontaniana A320 autospoilers
11 volana 2 andro lasa izay #1207 by irbaz444
Nividy ny Family Pack A320 aho ary nametraka izany. Tena mahagaga ny fiaramanidina. Tiako ny mari-pahaizana amin'ny sehatra ary ankafiziko ny fisotroana manga tsara tarehy amin'ny alina. Ny olana tokana dia te-hanaisotra ny autospoiler sy ny autoflaps. Ny tiako holazaina dia rehefa mitrandraka ny mpandroba dia mihazakazaka mandeha ho azy fa mihidy aloha loatra aho rehefa manodidina ny 60knots izay toa tsy dia misy loatra. Na dia eo aza ny fanesorana ireo ravina dia esorina ao anatin'ny 5-10seconds taorian'ny fisintonana. Tena tsy maniry io asa io aho. Misy fomba hanakanana ve?
10 volana 2 herinandro lasa izay #1222 by Matzoun
Tsy afaka. /: